ALLA MA ANIGAA NASIIBKAAS LEH ( DIO MIO!)
C/Rahman Eelay( eediran@yahoo.com )
Nin Talyaani ah ayaa wuxuu guursaday gabar Soomaaliyeed oo uu aad u jeclaa. Qoyskani waxay deganaayeen magaalada qaniga ah ee Kismaayo. Si farxad leh bay ku noolaayeen oo weliba uu aad u xiriirin jirey dadkii ay gabadhu ka dhalatay. Waxaa ninkani uu si fiican ula macaamili jirey Soomaalida deegaankaas ku dhaqan oo uu dhaqankooda iyo dharkoodaba qaadan jirey.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadh ka dhalatay qowmiyadaha Ajiga ah ee takoora, yasana walaalahood xag walba kala midka ah ay la kulantay ninkii Talyaaniga ahaa. Waxay nafteeda weydiisay sababta uu ninkan cadi u qabi karo gabadh aabaheed kabaha tolo oo Tumaal ah. Waxay is tustay inay waajib ku tahay in ninkani ogaado in gabadhu tahay nasab dhiman oo aysan u qalmin in ninkan cad ay guri ugu dhaxdo.
Ninkii Talyaaniga ahaa iyo Gabadhii Soomaaliyeed ee waajibaadka gudanaysay baa doodi dhexmartay:
Gabadhii : Maalin wanaagsan, Signore!
Talyaanigii : Maalin wanaagsan, Signorina!
Gabadh : Waxaan filayaa inaad tahay odayga Gabadha la yiraahdo……..
Talyaani : Haa waa xaaskeyga.
Gabadh : Haa.. waa xaaskaaga… waa sax. Laakiin ma is taqaanaan aabaheed?
Talyaani : Dhowr goor buu na soo booqday. Waa oday aad u wanaagsan!
Gabadh : Haa.. waa oday maskiin ah. Ma taqaan yuu u dhashay odaygu?
Talyaani : Yaah! Waxaan filayaa inaad isku dad tihiin (Soomaali)
Gabadh: Aad baad u khaldan tahay! Isku dad iyo isku noocba ma nihin
Talyaani : Sidee wax kaa yihiin gabadhaay? Waxaad isla tihiin Soomaali!
Gabadh : Waa runtaa ee laakiin iyada aabaheed waa Kaba tole.!
Talyaani : Kabatole aa! Ma anigaaba ogaa! Weligeed ii may sheegin. Ma anigaaba ogaa in gabadha aan qabo aabaheed kaba tole yahay! Alla Nasiib badniyaa “Dio mio”
Gabadh : Inta ay naxday baa hadal ka soo bixi waayey, Afkii baa juuqda gabay!
Talyaani : “Mahadsanid gabadhaay warka cusub ee farxada badan ee aad igu soo kordhisay” ayuu ku yidhi isagoo wejigu casaaday farxad awgeed.
Gabdhii: “Waar heedhe malaha waa sixran yahay baan filayaa oo cuntadaa wax loogu qooshaa ! waxbaba fahmi mayo” ayay tidhi iyadoo isla hadlaysa !.
Ninkii Talyaaniga ahaa isagoo aan meelna ku leex-leexan ayuu gurigiisii toos u abaaray, isla markiiba wuxuu xaaskiisii u sheegay khabaarka cusub ee uu ka soo maqlay magaalada. Wuxuuna weydiiyay in aabaheed Kaba tole yahay. Gabadhii baa haa ku jawaabtay. Ninkii Talyaaniga ahaa baa wuxuu xaaskiisii ku yidhi waan ku faraxsanahay farsamada wanaagsan ee aabahaa yaqaan iyo sida aan nasiib ugu yeeshay inaan Tumaal la xidido. Waxaanse ka xumahay inaad intaanu is qabnay oo dhan aad iga qarisay in aabahaa yahay nin xirfad wanaagsan iyo aqoonba leh.
Ninkii odayga ahaa baa fasax u aaday wadankiisii si uu u soo arko eheladiisa ku nool Talyaaniga. Markii uu soo noqonayey ayuu hadiyad ku qufulan sanduuq weyn horey u soo qaaday. Isagoon furin buu xaaskiisii ku yidhi :
“Ina keen aanu soo booqano aabahaa”. Markey yimaadeen gurigii Soddogii ayuu farta ka saaray hadiyadii. Ogaygii soddoga ahaa baa furay mise waa warshad yar oo kabaha iyo waxa laga sameeyaba farsameysa!
Odaygii baa aad u farxay oo ku yidhi : “ waad mahadsan tahay wiilkeygiiyow hadiyada wanaagsan eed ii keentay, laakiin…….”. Ninkii Talyaaniga ahaa baa yidhi : “ Ha ka baqin anigaa ku baraya sida loogu sameeyo nooc walba oo kaba ah iyo sida loogu tolaba” wuxuu kaloo yidhi : “ Waa farsamo aad u wanaagsan oo haddaanu nahay Talyaani aanu aad u qadarino, markaa waad u qalantaaye fadlan iga gudoon (Augurio!). Soddogii wuxuu aad u bartay makiinadii, howshiina waa ka fududaatay, dadkiisana wuu ka shaqaaleeyey, wuxuuna uga dhigay meherad ay ku faani karaan wax soosaarna leh!
Akhristow waxaa mar walba iga yaabisa sida aanu u xayeysiino kabaha laga keeno wadanka Talyaaniga iyo sida aanu u liidno farsama yaqaanadeena oo hadii la dhiiri gelin lahaa kaba badin lahaa Talyaaniga. Waxaad maqlasaa, haddaad tegtid meelaha Soomaalidu bucshurada ku haysato iyagoo faaninaya kabaha uu soo sameeyey Tumaalka Talyaaniga ah oo ku leh: “ Kabo Kooyo waaye, fiiri waxaa lagu sameeyey Talyaaniga. Eesh calaa kabo waaye!!!!”.
Waa la wada ogyahaye, Allaha na fahansiiyo in:
Talyaani Tumaalka Taalo u dhisay,Ajiguna Tumaalka uu Tunka ka Toogtay!
Waxaa sheekadan ii soo gudbiyey nin aan rabin in la magacaabo A.M./USA